Nhọrọ Brozụ ahịa Kacha Mma
Onye Nhọrọ ahia
Nhọrọ ahia okwu
Nzuzo nke nkiti
Robot & akara
Ndị na-eme ọnụọgụ Bitcoin
Ghọta Nhọrọ Azụmaahịa Trading Forex
Nhọrọ Forex na ọnụọgụ abụọ
Nabata na ọnụọgụ azụmaahịa, ihe ọmụma bara uru, ndụmọdụ na mmụta maka ndị azụmaahịa ọhụụ ma ọ bụ nke na-achọ ịchọta ihe ndị ọzọ gbasara nhọrọ ọnụọgụ abụọ, Forex Trading na Cryptocurrency. Na weebụsaịtị anyị ị ga - enweta ohere na - akparaghị ókè maka ndị a:
• Ozi dị mkpa gbasara ụdị nhọrọ, akọnuche azụmaahịa na ntụnyere ọnụ ahịa
• Enyemaka atụmatụ - njikwa ego, ụdị atụmatụ dị iche iche, na nyocha nke ọrụaka
• Nyochaa ahia ahia - ihe omuma doro anya na ndi ahia ahia ejighi ego
• Egwu wayo - ndụmọdụ gbasara ịchọpụta wayo nwere ike ịdị
• Nyocha ngosi - nyocha banyere akaụntụ ngosi dị iche iche
• Ihe nrịba ama - ozi igodo nke otutu akara di iche
• Nhọrọ blọọgụ - na - esoro ọsịgụ ọhụrụ anyị na azụmaahịa Nhọrọ
Ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Nhọrọ na Nyocha Nkà
Mgbe ịre ahịa na nhọrọ ọnụọgụ abụọ, achọrọ ka ịkọ atụmatụ nke ọnụahịa ọnụahịa nwere ike ịkwaga, na-ekwu maka ọnụahịa iku, na njedebe ...
Lines Trend - Ngwaọrụ bara uru na ọnụọgụ nhọrọ Nhọrọ
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-eto eto na ndị na-etinye ego na ụwa dum na njirimara ya dị mfe na ọtụtụ uru. Agbanyeghị, dịka ọnụọgụ abụọ na-achọ ka mmadụ tụọ ihe ga-eme n'ọdịnihu nke akụ bara ụba ...
Otu nkwụsị Resource maka azụmaahịa nhọrọ
Ma ị na-achọ ndụmọdụ mmepe atụmatụ ma ọ bụ na ịchọrọ ịgafe nyocha nyocha na ndị na-ere ahịa ahịa kachasị elu, weebụsaịtị anyị na-enye ndị ahịa ọhụụ na ndị nwere ahụmahụ ozi niile bụ isi.
Tinye akà rà ahia
24 / 7 ahia
$ 1 kacha nta azụmaahịa
Afọ $ 20 n'efu
Bunary nọ na-enye ọrụ azụmaahịa n'ịntanetị kemgbe 1999. N'ime ihe karịrị afọ anọ, anyị na-aga n'ihu na-azụlite usoro ahia ụwa anyị, ebe anyị na-eme ike anyị niile iji mee ka azụmaahịa dị mma ma baara gị uru.
Forex bụ ahịa mba ọzọ gbanwere ebe a na-ere ahịa ego abụọ. Azụmaahịa mba ofesi nwere ego site na obodo ọ bụla, na-azụ ahịa 24 awa kwa ụbọchị, Mọnde ruo Satọde.
Alert Arrow ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Ssrc No Repaint
Forex Turbo egosi na usoro ahia
Azụmaahịa Forex na-arụ ọrụ site na ịzụta otu mkpụrụ ego na nke ọzọ currency. A na - akpọ ego ego na ụzọ abụọ n'ime ụzọ abụọ ahụ (nke ọzọ n'aka ekpe) nke a na - akpọ 'base', ebe ego nke ọzọ dị na aka (n'aka nri) ka ana - akpọ 'ego'.
Ọmụmaatụ: EUR / USD - EUR (Euro) bụ ego mbido na USD (Dollar US) bụ ego ego.
A na - eme otu uru (ma ọ bụ mfu) site na otu ego na - ekele ma ọ bụ na - eleda ndị ọzọ anya na njikọta ego.
Buy zụta otu ụzọ eji ego azụ ma ọ bụrụ na i kwenyere na isi ego ga - ewusi ike megide mkpụrụ ego. Na-ere otu ụzọ ego ma ọ bụrụ na i kwenyere na isi ego ga-akụda megide counter ego.
A na-atụle uru na Pips - Pasent na Points. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ nke ego na-ekwu maka ebe ndozi 5 na mgbanwe na ebe ntụpọ ikpeazụ - a na-akpọ 'ọkpọkọ'. Dịka ọmụmaatụ, ọnụ ahịa EUR / USD bara uru na 1.3542 - 2 na njedebe bụ pip. Ọ bụrụ na ọnụahịa nke EUR / USD bilitere na 1.3544, mgbe ahụ, a na-ekwu na EUR / USD bilitere 2 pips.
Mgbe ị na-azụ ma ọ bụ na-ere ego, a na-enwe ọnụahịa abụọ mgbe ọ bụla - ọnụahịa ọnụahịa na ọnụ ahịa ịrị elu. A na-akpọ ihe dị iche n'etiti ọnụahịa ndị ahụ ka ọ gbasaa. Ọnụ ego a na-akwụchitere na-anọchite anya ọnụahịa kachasị ọnụ nke onye na-azụ ahịa chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ụdị ego, ebe ọnụahịa a na-ajụ na-anọchite ọnụ opekempe nke onye na-ere ahịa dị njikere ịnata maka ụdị ego ahụ.
A na-enyezi ahia azụmaahịa Forex, n'ihe banyere ndị na-ere ahịa Forex, a na-enye leverage nke 100: 1. Nke a pụtara na a na-ebuli ahia ọ bụla elu n'oge 100, na-eme ka uru dị elu ka onye ahịa ahụ nwee ike ịbawanye ego a na-azụ.
Forex Robots maka Ahụmịzụ Azụmaahịa Asọmpi
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa nke chọrọ ire ahịa site na iji robots Forex dịka ị chere na ha nwere ike ime nke ọma karịa gị, ọ bụghị naanị gị bụ onye na-eche otú ahụ. N'ihi na Forex ahia na-enwe mmetụta site na mmetụta na mmetụta nke onye na-azụ ahịa n'otu n'otu, ọtụtụ oge mkpebi na-ada ada. Nke a abụghị ihe ị chọrọ mgbe ị na-azụ ahịa ụdị ego abụọ; ya mere, ịchọrọ robots Forex.Ọ baghị uru ikwu na Forex robot bụ sọftụwia kọmputa na-akpaghị aka nke na-ere ndị na-azụ ahịa na-enwechaghị ihe ọmụma banyere ahịa azụmaahịa algorithms. Ọ dị mkpa ịmara na ndị na-ere ahịa na-ekwu na enwere ike irite uru ọbụlagodi na ịnọghị n'ihu PC gị; agbanyeghị, ị ga - esite na nzukọ ziri ezi.
Gbalịsie ike na ha bụ ihe ha zụtara iji bụrụ maka ọ bụrụ na ị daa n'ịhọrọ akụ robot ziri ezi, ohere ị nwere ike ị ga-ada bụ uru. Ya mere, họrọ Forex robots site n'oké ọhịa nke ndị na-eweta ya. Dika odi otutu onu ahia nke Forex ahia robots n’ahia, i kwesiri inwe obi uto maka udiri ihe ndi ighoro.
Forex robots ndị na-ekwu na a gafere ọtụtụ ule dị ukwuu nke rụpụtara nsonaazụ na-eju afọ ya mere a na-azụ ahịa dị ka nke ọma n'ịmepụta uru na-agbanwe agbanwe. Agbanyeghị, ole ndị bụ top Forex robots Kwesịrị ikpebi gị mgbe ọtụtụ nyochara na nnwale nke ọtụtụ ndị na enye ọrụ.
Ntụkwasị obi Forex robots
Iji maa atụ, azịza nke elu Forex robot abụghị nke kwụ ọtọ; agbanyeghị, ihe kachasị mkpa ị ga-echebara ebe a kwesịrị ịbụ nnukwu ọdịiche dị n’etiti akwụkwọ ntuziaka aka na sistemụ azụmahịa akpaghị aka. Ka o sina dị, nhọrọ kachasị mma n'ihi ya, maka onye na-azụ ahịa Forex amateur, bụ iso ndị robots Forex akpaghị aka na-ere ahịa.
Ọ dị ka ọtụtụ ndị ahịa na-erite uru na azụmaahịa site na iji ngwa ọdịnala ekwenyeghị na robots Forex; agbanyeghị, mgbe ị na-ahọrọ robots ndị dị elu nke Forex maka ojiji gị, gbaa mbọ hụ na enwere isi iyi ziri ezi maka ozi. Dịka ọmụmaatụ, TraderBinary na-enyere gị aka ịhọrọ robot Forex dị mma ma emesịa nyere gị aka ịghọ onye ahịa ọkachamara.
Eleghi anya ụzọ kachasị dị mma iji mata nke bụ isi Forex robots bụ ịga na ịdenye aha websaịtị ndị a na-enyocha robots kachasị Forex. TraderBinary bụ otu saịtị dị otú ahụ na-enye gị ozi zuru ezu banyere onyinye na ngwọta kachasị.
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke ọnụọgụ abụọ
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ - Gold na-ere ahịa
N'etiti ọtụtụ ụdị ngwaahịa dị iche iche gụnyere dịka akụ dị n'okpuru ala na ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ, otu n'ime ahịa ndị a na-erekarị bụ ọla edo. Ọtụtụ ndị na - azụ ahịa na - achọpụta ya ...
Usoro ọnụọgụ abụọ Nhọrọ: EUR / USD
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ wetara ndị ahịa ya ụdị ụzọ abụọ dị iche iche iji azụmaahịa dịka akụ dị n'okpuru. Isiokwu na-esonụ na-atụle usoro ndị dị mfe iji zụọ ahịa na EUR / USD ....
Ọnụọgụ abụọ Nhọrọ ụdị ahịa azụmaahịa
Enwere ike ijikwa nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke ụdị ụzọ dịgasị iche iche dabere n'ụdị atụmatụ ị na-eme ibido. Isiokwu na-esonụ na-akọwapụta usoro azụmaahịa IN / OUT…
Gịnị Bụ Ahịa?
N'okwu dị mfe, ngwa ahịa bụ akụrụngwa akụrụngwa eji enyere aka na ndụ anyị kwa ụbọchị. Anyị na-eji ike ịkwado ya, ọla ka
rụpụta ngwa agha na ngwa ọrụ, yana ihe ubi maka nri. Ihe ndi a - ike, ọla, na ngwa oru ugbo - bu ihe ato nke ngwa ahia, ma ha bu ihe ndi di nkpa nke aku na uba uwa.
Ngwa ahịa n'ozuzu ha na-emezu usoro ndị a:
Tradability: Putara na agha gha achota ugbo ala nke ga enyere gi aka ahia ya. Iji maa atụ, a gụnyere ihe n’ahịa ma ọ bụrụ na o nwere nkwekọrịta ọ ga-enwe n’ihu n’ihu otu n’ime mgbanwe ego, ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ahazi ya, ma ọ bụ nwee ego na-azụ ahịa dịka ejiri aka gbanwere.
Uranium, nke bụ ike dị mkpa nnweta, anaghị esoro nkwekọrịta ọhụụ ọdịnihu, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ ọkachamara na-egwu ala na nhazi nke a. Site na itinye ego na ụlọ ọrụ ndị a, ị ga-ekpughe uranium.
NgbapụtaA na - etinye mmanụ mmanụ n'ahụ n'ihi na enwere ike ibunye ya na barel, a na - etinye ọka wit maka na ọ nwere ike ibute ya site na ya.
liquidity: Ngwa ahịa ọ bụla ga-enwerịrị ahịa dị n'ahịa ya na ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa na-ebugharị ibe ha mgbe niile. Liquidity dị oke mkpa n'ihi na ọ na-enye gị nhọrọ nke ịbanye na ịpụ apụ na-enweghị ihe ọ bụla ị ga-eche ihu ike nke ịnwa onye na-ere ma ọ bụ onye na-ere ihe maka nchekwa gị.
Ize Ndụ na itinye ego na ngwa ahịa
Etinye ego bụ ihe niile banyere ijikwa ihe egwu dị na ịpụta nloghachi. Lee ụfọdụ ọghọm ndị ị na-enwekarị mgbe ị na-etinye ngwaahịa na ụfọdụ obere ihe ị nwere ike ime iji belata ihe egwu ndị a.
Ihe egwu dị na ala ga-ejikwa ego eji azụ ahịa
Otu n’ime ihe egwu dị n’ahịa bụ na ihe ndị dị n’ụwa niile dị na kọntinent dị iche iche na ikike ịchịkwa ngwa ahịa ndị a dị n’aka gọọmentị, ụlọ ọrụ mba ụwa na ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, iji nweta nnukwu mmanụ dị na mpaghara Ọwara Oké Osimiri Peshia, ndị ụlọ ọrụ mmanụ ga-eso mba ndị nwe Ọwụwa Anyanwụ ignwa nke nwere ikike maka mmanụ a.
Esemokwu nke mba ụwa banyere nchịkwa akụ ndị sitere n'okike bụ ihe juru ebe niile. Mgbe ụfọdụ mba mba nnabata ga-achụrụ ndị ụlọ ọrụ si mba ofesi aka na
Mmepụta na nkesa ihe ndị sitere n'okike.
Yabụ olee otu ị ga - esi chebe onwe gị site na amaghị ihe a? Otu ụzọ bụ itinye ego na ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe na akụ na ụba nke ọnụ ọgụgụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’inwe mmasị itinye ego na ụlọ ọrụ mmanụ mba ofesi, soro otu eji ndekọ ndekọ usoro edepụtara.
Ihe egwu pụrụ iche yana ngwaahịa
Azụ ahịa ndị ahụ, dị ka nkekọ ma ọ bụ ahịa ngwaahịa, ka ndị ahịa na-eburu n’uche inweta uru dị mkpirikpi site na ịkọwa ma ọnụahịa nke nchekwa ga-agbadata ka ọ ga-agbadata.
Ọ bụrụ n’ahịa ahia, na-elele ahịa ndị ahụ mgbe niile, na-achọpụta ihe niile i nwere ike ịmata gbasara ndị sonyere n’ahịa ahụ ka i wee nwee ike ịmata ọdịiche dị n’etiti ndị ahịa azụmahịa na ndị na-eche echiche.
Otu ụzọ ị nwere ike isi lelee anya bụ mkpesa nke ndị azụmaahịa, nke ndị Ngwongwo ahia ahia ahia ahia ahia ahia ahia ahia (CFTC).
Nyocha Nchọgharị Forex
Azụmaahịa Forex nwere nnukwu ikike na echiche niile bụ na mmadụ ekwesịghị ichegbu onwe ya gbasara nuances na-eme ụdị azụmahịa a. Eziokwu ...
Ihe dị mkpa iji mara mgbe ị na-etinye ego na Forex
Ahịa Forex gụnyere ego ndị eji eme gburugburu ụwa, ọ dịkwa mkpa na ndị na-azụ ahịa na-edo onwe ha anya maka mgbanwe ọhụụ metụtara ahịa a. Mkpebi na-aga nke ọma na Forex ...
Ndị na-eme ọrịre na-atụ aro
Afọ $ 20 n'efu Review Gị
Nchịkọta ego Dabere 100% Review Gị
Nchịkọta ego Dabere 50% Review Gị
Kpọtụrụ Anyị - Okwu & Ọnọdụ - gbasara Anyị - amụma nzuzo - kuki Policy
Ingdọ aka na ntị n'ozuzu oke: Nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-ebute oke ihe egwu ma nwee ike ibute mmebi ego gị. Dịka nke a, Nhọrọ ọnụọgụ abụọ nwere ike ọ gaghị adabara gị. Ikwesighi itinye ego nke ị gagh i enwe ike imefu. Tupu i kpebie ahia, ikwesiri ilebara ebumnuche gi anya, ihe omuma gi na nnabata ya. Ọnweghị n'ọnọdụ anyị ga-enwe ụgwọ ọ bụla nye mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla maka (a) ọghọm ma ọ bụ mmebi ọ bụla na akụkụ ọ bụla nke kpatara, site na, ma ọ bụ metụtara azụmahịa ọ bụla gbasara nhọrọ ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ (b) ihe ọ bụla, na-echeghị eche, pụrụ iche. , nke ga-eweta ma ọ bụ mebi emebi ihe ọ bụla.
AKW DKWỌ DEMO $ 10.000